चीन फिन सील पाउच निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Rijing Techtronic
घर > उत्पादनहरू > लचिलो प्याकेजिङ्ग > फ्ल्याट पाउच > फिन सील पाउचहरू
फिन सील पाउचहरू
चीनमा प्याकेजिङ पाउचहरू उपलब्ध गराउने 14 वर्षको समृद्ध अनुभव, RJ PACK ले तपाईंलाई बल्क फिन सिल पाउचहरू उपलब्ध गराउन सक्छ। फिन सील पाउचहरू प्याकेज गरिएका खानेकुराहरू जस्तै स्न्याक्स, गमी क्यान्डीहरू र मिठाइहरूका लागि उपयुक्त छन्। आकारको बावजुद, पाउच उच्च गुणस्तरको फिल्मबाट बनेको छ जुन उत्कृष्ट बाधा प्रदर्शन प्रदान गर्न ल्यामिनेट गरिएको छ। चीनमा फिन सील पाउचहरू आपूर्ति गर्नको लागि तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार बन्ने आशा छ।
फिन सील पाउचहरू प्याकेज गरिएका खानेकुराहरू जस्तै स्न्याक्स, गमी क्यान्डीहरू र मिठाइहरूका लागि उपयुक्त छन्। आकारको बावजुद, पाउच उच्च गुणस्तरको फिल्मबाट बनेको छ जुन उत्कृष्ट बाधा प्रदर्शन प्रदान गर्न ल्यामिनेट गरिएको छ।
एक सरल पाउचको रूपमा, फिन सिल पाउचहरू सामग्रीलाई नमी, पराबैंगनी किरण र अक्सिजनबाट जोगाउन उच्च गुणस्तरको सामग्रीबाट बनेका हुन्छन्। थप रूपमा, तपाइँ तपाइँको प्याकेजिङ्ग आवश्यकताहरु र बजार मापदण्डहरु लाई पूरा गर्न को लागी तपाइँको झोलाहरु लाई उत्तम तरीका मा अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।
3. फिन सील पाउच सुविधा र आवेदन
५) फिन सील पाउचहरू प्याकिंग स्न्याक्स, पाल्तु जनावरको खाना, कफी, चिया, मसला, चामल आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
4. फिन सील पाउच विवरणहरू
5. फिन सील पाउच योग्यता
6. फिन सील पाउचहरूको वितरण, ढुवानी र सेवा
म फिन सील पाउचहरूको अर्डर मात्रा अनुसार २० - ४० दिन लिन्छु
हामीसँग BRC, HACCP, SGS र ISO छ। र हामीसँग यी वातावरणीय फिन सील पाउचहरूको लागि पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल प्रमाणपत्रहरू पनि छन्।
हट ट्याग: फिन सील पाउचहरू, निर्माताहरू, आपूर्तिकर्ताहरू, कारखाना, स्टकमा, नि: शुल्क नमूना, ब्रान्ड, चीनमा निर्मित, चीन, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण, CE, FDA, थोक, खरिद, अनुकूलित, थोक, सस्तो, छुट, कम मूल्य, फेसन, सबैभन्दा नयाँ, गुणस्तर, उन्नत, नवीनतम बिक्री, फैंसी, वातावरणीय
तीन-साइड सील पाउचहरू